2018-03-07 05:13:59 19
Amazwi kaNkulunkulu athi: “Ngaphambi kokuba oniwe nguSathane, umuntu wayelandela uNkulunkulu futhi elalela amazwi Akhe. Wayesemqondo omuhle futhi enonembeza omuhle, futhi enobuntu obuvamile. Ngenxa yokoniwa uSathane, umqondo, unembeza nobuntu bomuntu obuhle bonakala futhi konakaliswa uSathane. Ngakho walahla ukulalela nokuthanda kwakhe uNkulunkulu. Isimo sakhe sesifana nesesilwane, kanti ukuhlubuka kwakhe uNkulunkulu kwenzeka kaningi futhi kuyadabukisa kodwa umuntu uselokhu engazi futhi engakuboni lokhu futhi ulokhu ephikisa ngobumpumputhe elokhu ehlubuka” (“Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Ulwazi lweminyaka eyizinkulungwane eziningi ngesiko nangomlando wasendulo kuwuqede nya umcabango nombono womuntu oqine kakhulu ukuthi ungabhodlozwa futhi ushintshwe. … Izimfundiso zobugqila yizo ezise umuntu “eHayidesi,” ukuze umuntu engabi nawo amandla okwenqaba. Ukucindezelwa komuntu ngezindlela eziningi yikho okumenze wangena wajula kancane kancane eHayidesi…. Ulwazi ngesiko lasendulo lumthumbe ngesinyenyela umuntu phambi kukaNkulunkulu lwamenza inkosi yodeveli namadodana akhe. IziNcwadi Ezine kanye neziNcazelo Ezinhlanu kuthathe umcabango nombono womuntu kwawubeka kwenye inkathi yokuhlubuka, kwenza umuntu wabakhonza nakakhulu labo abaloba iziNcwadi Nezincazelo, bandisa imibono yabo ngoNkulunkulu. Inkosi yodeveli imxoshe ngokungabi nanhliziyo uNkulunkulu ngaphandle kokunaka, kuyilapho ingena isinyelela enhliziyweni yomuntu. Kusukela lapho, umuntu ubelokhu enomphefumulo omubi nobuso benkosi yodeveli. Ukuzonda kwabo uNkulunkulu kugcwele izifuba zabo, ukukhohlisa kwenkosi yodeveli kusakazeka kumuntu usuku nosuku…. Leli qembu lezigelekeqe! Kade befile kodwa sebezitika ngenjabulo futhi babanga izinxushunxushu. Ukuphazamisa kwabo kwenza izwe lishintshashintshe[a] futhi kwenza inhliziyo yomuntu yethuke, bamshintshile umuntu wagcina esefana nesilwane esibi ngokwedlulele, ayisekho neyodwa insalela yokuthi umuntu ekuqaleni wayengcwele” (“Umsebenzi Nokungena (7)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Kula mazwi kaNkulunkulu ngaqonda ukuthi isintu esadalwa nguNkulunkulu ekuqaleni sasimlalela uNkulunkulu, sasimkhonza, sinonembeza nokucabanga okujwayelekile kwabantu, futhi sasingakangcoliseki, kanjalo futhi singakenzi bubi nhlobo. Emva kokuba isintu sesonakaliswe nguSathane, isono saqala ukuba umngani omiyo womuntu. Esikhathini seminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa, uSathane ulokhu eqhubeka nokuhlupha nokonakalisa umuntu. Ufaka imicabango yokuziphendulela kanye nemiqondo yokwakhiwa kubantu, ukuze umuntu aphile ngokwethembela ebuthini bakhe, nokuholela ekubeni umuntu abe ngongcole nowonakele nakakhulu, bese umhlaba uqhubeka nokuba mnyama nokuba mubi nakakhulu. Amazwi afana nokuthi “Wonke umuntu uzifunela okwakhe wonke umuntu ezibhekelele yena,” “Ngivukelani ngovivi uma ngingeke ngizuze lutho?” “Umuntu ufela imali; inyoni ifela ukudla,” “Njengoba umqondo omncane ungayenzi indoda elungile, indoda yangempela nayo inabo ubuthi,” “Sebenzisa ithuba, impilo imfishane,” “Akukaze kube khona uMsindisi” futhi “Akekho nhlobo uNkulunkulu emhlabeni” konke kungubuthi obufakwa kumuntu nguSathane. Lezi zinto ziphenduka izimpilo zabantu futhi zibe yimithetho abaphila ngayo izimpilo zabo, ukuze kungabe kusabakhona muntu okholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, kungabe kusaba khona muntu okhonza izulu, futhi kungabe kusabakhona muntu olalela izinto ezinomqondo noma onembeza babo. Ayisekho indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, akusekho mikhawulo ebalawulayo emthethweni nasezimisweni ezavela kuNkulunkulu. Umuntu usefakwe ubuthi futhi walawulwa nguSathane, ukuze umuntu ahlale evukela uNkulunkulu, ezicabangela yena, edelelekile, enobugovu, eziphakamisile, ehlale enobubi njalo nje futhi ezitika ngemikhuba emibi, engalawuleki, ehlezi ephula imithetho, engenankulunkulu futhi elihlongandlebe. Sebephenduke amadimoni uqobo lwawo njengoba sebengabantu abangenanembeza, bengenaso isimilo, imvelo yomuntu, futhi sebengabantu esiyimvelo kubo impilo yenzondo. Ikakhulukazi, amagama athi “Wonke umuntu akazibheke yena futhi udeveli athathe ongemuva” awubuthi obubulalayo obutshalwa nguSathane kumuntu, futhi lokhu kwakucace bha komalume bami. Umuntu uphilela nje okufunwa nguye, eqhakambisa inzuzo ngaphezu kwakho konke, enomcabango othi “Ngingavukelani ngovivi uma ngingeke ngizuze lutho?” Ukuze bazuze okunye okuningi kanye nokufunwa yibo okukhulu, abantu bangenza noma yibuphi ububi noma izinto ezonakele, benze noma yiziphi izivumelwano ezingenamahloni, ezinyanyekayo noma izenzo zobunswelaboya. Alukho uthando noma ukuzwana kwangempela phakathi kwabantu—kugcwele nje ukukhohlisana, ukuxhaphazana nokulimazana kodwa. Ukuthi amalungu omndeni owodwa angaxabana kanje aphenduke izitha, alwe wodwa ebanga imali nezinto azifunayo. Kanye nokuthi, izihlobo nabangani bakhohlwa yizo zonke izimiso zesimilo ngenxa nje yokwenza inzuzo; bangabukeka bengabantu, kodwa banezinhliziyo zezilwane. … Ukuthi umuntu angenza lezi zinto ezimbi kangaka konke kungenxa yokuthi ufakwe ubuthi ngukuthi “Wonke umuntu akazibheke yena futhi udeveli athathe ongemuva” kukaSathane futhi ungaphansi kokubuswa nguye. Kuyabonakala ukuthi umthombo wezenzo zomuntu ezimbi ubuthi bukaSathane, kanye nokuthi lo ngumthombo wobumnyama emhlabeni.
Emva kokubona ubumnyama nobubi bukadrako omkhulu obomvu kanye nokuthi wonakalisa kanjani futhi ubanyathela kanjani abantu ngaphansi konyawo lwakhe, ngizwa nakakhulu ubungcwele nobuhle bukaKristu. UKristu wuye kuphela ukukhanya kulo mhlaba wobumnyama, nguKristu kuphela ongasindisa isintu asisize siphunyuke kule ndawo emnyama nenobubi, futhi kulapho uKristu ethatha amandla kuphela lapho ukukhanya kuzofinyelela esintwini. Ngoba uNkulunkulu kuphela onengqikithi enhle nelungile, futhi uNkulunkulu kuphela owumsuka wokulunga nokukhanya, uNkulunkulu kuphela uphawu olungeke lwasibekelwa noma lwalinyazwa yibo bonke ubumnyama nobubi, futhi uNkulunkulu kuphela ongaguqula ubuso obudala bomhlaba wonke alethe ukukhanya emhlabeni, futhi uNkulunkulu kuphela ongaletha isintu esiphethweni esihle nesimangalisayo. Ngaphandle kukaNkulunkulu, akekho ongakwazi ukwenza lo msebenzi futhi akekho onganqoba noma abhubhise uSathane. Njengoba kusho emazwini kaNkulunkulu: “Ezweni elibanzi, sekwenzeke izinguquko ezingenakubalwa ziphindelela. Akekho okwazi ukuhola nokuqondisa lesi sintu ngaphandle kukaNkulunkulu obusa phezu kwazo zonke izinto endaweni yonke. Akekho onamandla amakhulu ongasebenza futhi alungiselele lesi sintu, kuncane kakhulu umuntu angakwenza ukuze aholele lesi sintu endaweni enokukhanya nokusikhulula ekungabini nabulungiswa okusemhlabeni” (“UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Ngifuna ukulungisa ukungalungi kwabantu emhlabeni. Ngizozenzela Mina umsebenzi Wami emhlabeni jikelele, nginqabe ukuthi uSathane aphinde alimaze abantu Bami, nginqabe ukuthi isitha senze intando yaso. Ngizoba yiNkosi emhlabeni ngihambise isihlalo sami sobukhosi lapho, ngenze ukuthi zonke izitha ziwele phansi zivume amacala azo phambi Kwami” (“Izwi Lamashumi Amabili Nesikhombisa” Lamazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngabona emazwini kaNkulunkulu ukuba namandla onke Kwakhe negunya Lakhe, ngabona ukuthi nguNkulunkulu kuphela ongasisindisa thina esiphila ngaphansi kokubusa kukadrako omkhulu obomvu osesinyathele ngaphansi kwezinyawo zakhe. Ngenxa yalokhu inhliziyo yami ilangazelela nakakhulu ukuba uKristu athathe amandla, nokuba udrako omkhulu obomvu ngokushesha afinyelele ekupheleni kwakhe.
a. “Izwe lishintshashintshe” kubonisa ukuthi uma othile ecebile futhi enamandla, abantu bayazincengela kubo, kanti uma umuntu engenamali futhi engenamandla, abantu abamnaki. La mazwi abhekise ekungabini nabulungiswa kwezwe.
Okulandelayo：Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele